Xiaomi wuxuu joojinayaa bilaabida MIUI 10 betas bishaan | Androidsis
Xiaomi waxay isu diyaarineysaa inay soo bandhigto MIUI 11 wax yar, la filayo inuu yimaado bisha september sida lagu sheegay macluumaad cusub. Tani waxay noqon kartaa run, tan iyo markii magaca Shiinaha wuxuu durbaba diyaarinayaa inuu joojiyo daahfurka MIUI 10 betas. Calaamad cad oo muujinaysa in nooca cusub ee lakabkiisa qaabeynta uu durba aad ugu dhow yahay inuu suuqa gaadho.
MIUI 10 betas waxay dhammaan doontaa bisha Ogosto, maadaama ay suurtagal noqotay in la ogaado. Laga bilaabo bishan, wax dambe lama sii dayn doono. Markaa waxay umuuqataa inay cadahay in Xiaomi ay diiradda saareyso sidan qaabkeeda soosocda, oo ay tahay inuu gaaro suuqa wax yar.
Sida ay suurtagashay in la ogaado, waa nooca 9.8.29 ee MIUI 10 wuxuu noqon doonaa daabacaadii ugu dambeysay ee lagu bilaabi doono barnaamijka beta. Xiaomi markaa ma bilaabi doonto wax beta ah kiiskan. Laga bilaabo Ogosto 31, barnaamijkani wuu dhammaanayaa, si wax waliba u muujiyaan in shirkaddu ay diiradda saareyso una diyaar garoobeyso imaanshaha MIUI 11.
Shirkadda ayaa ka shaqeysa isbeddelo badan oo ku saabsan lakabkaaga qaabeynta cusub. Mid ka mid ah waxay noqon doontaa yareynta xayeysiiska, taas oo ah wax abuuray khilaaf badan bilihii la soo dhaafay suuqa. Marka waxay noqon doontaa isbeddel in badan ay gacmo furan ku soo dhaweyn doonaan.
MIUI 10 horeyba wuxuu u matalay tallaabo muhiim u ah astaanta. In kasta oo bilahaani ay naga tageen isbeddelo badan, sida markii ay ku dhawaaqeen inay joojiyeen sii deynta betasyada caalamiga ah ee lakabka qaabeynta. Hadda kaliya betas ayaa lagu sii daayay Shiinaha, halka dadka isticmaala adduunka intiisa kale ay tahay inay sugaan nooca xasilloon.
Waxaa loo maleynayaa inay raaci doonaan isla siyaasaddan isla noocooda cusub. Waxay noqon laheyd wax la yaab leh haddii ay ku sameeyeen kaliya MIUI 10, markii ay ka yarayd wax ka yar laba bilood nuqulkeedii cusubi inuu yimaado. Laakiin sikastaba xaalku ha ahaadee, toddobaadyadan waan ogaan doonnaa wax walba, tan iyo bishii Sebtember waa inaan ogaanno noocaan cusub si rasmi ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » ROM » Xiaomi wuxuu joojinayaa sii deynta MIUI 10 betas bishaan
Google Pay waxay horey u soo bandhigtay qaabka mugdiga ah ee barnaamijka